Hogaan iyo Horumar Q 4aad Qaybaha Hogaamiyaasha (ENG Mohamed Aden Hassan)
Monday June 10, 2019 - 11:26:20 in Articles by Hadhwanaag News
Inago Tix galinayna cilmi badhistii asaecenter qaybaha iyo qaabka hogaamiyayaashu waa hab u qofku u isticmalayo awood
Cilmi baadhistu waxay cadeesay kala duwanan shiyaha hogamiyayaasha iyado hal beeg loga dhigaayo hadaba tirada raacsan hogamihaas o u hogaaminaayo qaabka ugu haboon ee lo kala saarayo waa waa hab shaqeedkoda iyo xaaladooda hogaamineed.
Hadaba qaybaha Hogamiyaasha halkan hoose ayaan kugu taxayaaye insha allah:
·Autocratic Leadership: Hogaamiyahani waxa u udub dhaxaad u yahay dhamaan wax walba awood iyo mas uliyadba waxa una go’amiya wax walba isaga o aan la tashan cida ay wada tashiga leyihiin.
·Democratic Leadership: Hogamiyahan nocani ah waxa u ka tacaluqaa samaynta go’aan waliba waxa u la tashtaa cida ay wadagan talada waxa una go’aamiyaa hadii la so jeediyo talo waliba isaga o la tashanaaya cida ay shaqada wadaagan waana hogaamiye wanaagsan waxa anu la gaaryahay xidhidhka kala dhaxeya shaqalihisa sare iyo kuwa hosaba.
·Strategic Leadership Style: Hogaamiyaha noocan ahi waxa u ka taculaqaa baahida hogaamiyed e lo qabo urur midaysan strategic leader kuma xadidna kala saraynta ururkaas.
9. Transactional Leadership: Hogaamiyahan noocan ahi waxa u joogteya ilaaliya xaalka iyo isabdalka waxa u na ka taculaqu isbadal ay si dhakhso ah ay ku helaayan cida raacsan e u hogaaminaayo waxa una abaal mariyaa shaqalihiisa waaana la kulmaa mar marka qaar.
11. Visionary Leadership: Hogaamiyahan noocan ahi waxa u ka Tacaluqaa aqoonsiga hababka iyo stepska iyo waliba qaabka hogaamiyaha iyo khibradaa u ka helay dadka kale waxayna kaso dherin dheriyaan fekeradooda waxyabaha xaqiiqda ah e ay nolosha ka heleen.
Q 4AAD Q 4aadQaybaha Hogaamiyaasha (Mohamed Aden Hassan)